Fidinan'ny Praiminisitra tany Mahajanga | Primature
Fidinan’ny Praiminisitra tany Mahajanga
Mahazoarivo, ny 03 aprily 2021 – Nidina tany Mahajanga, nisolo tena ny fitondram-panjakana, nijery ifotony ny zava-misy sy ny fiatrehana ny fifehezana ny valanaretina covid-19 ny Praiminisitra Ntsay Christian io maraina io. Nihaona tamin’ireo mpitantana sy solontenam-panjakana miasa eo anivon’ny Faritra Boeny ny delegasiona notarihiny, ary nandray ny tatitra momban’ny fivoaran’ny valanaretina sy ny fitantanana amin’ny ankapobeny ny fandraisana an-tanana sy fitsaboana an’ireo marary, ary ny fahasalamam-bahoaka.
Raha tsiahivina, manoloana ny fihanaky ny covid-19 dia nandray fanapahan-kevitra tamin’ny fampihatoana ny fivoahana sy ny fidirana ao amin’ny Faritra Boeny, mandritra ny fotoana voafetra, ny fitondram-panjakana, 11 andro lasa izay; ary dia nisaotra ny vahoaka sy ny Faritra ny Praiminisitra noho ireo ezaka vita tamin’ny fanarahana ny fepetra maro isan-karazany napetraka. Nakasitrahany manokana ihany koa ny asa vitan’ireo tompon’andraikitra tsy ankanavaka izay tsy nitsahatra nijery ny tombontsoan’ny vahoaka sy ny tombontsoan’ny firenena tao anatin’izay fe-potoana izay. Notsiahiviny fa « mbola mitohy ny ady ataontsika amin’ity valanaretina ity ary miahy ny vahoaka hatrany ny fitondram-panjakana, ka izay no nahatonga ny Filohan’ny Repoblika nandefa izao delegasiona izao aty amin’ny Faritra Boeny ».
Araka izany dia nomarihin’ny Praiminisitra fa nifampiresahana tamin’ireo tompon’andraikitra ny hiompanan’ny ezaka eo amin’ny fiainana andavanandron’ny vahoaka. Teo no nisarihany ny sain’ny rehetra amin’ny tokony hanohizana ny fitandremana, eny na dia ao anatin’ny fotoan’ny fety aza isika. Ho an’ny alatsinain’ny paska manokana dia efa misy fandaminana napetraky ny tompon’andraikitra any an-toerana ka tokony hanaraka an’izany daholo ny rehetra : « mila fitoniana isika ary mila fandraisana andraikitra ny tsirairay, satria ny zava-dehibe dia salama sy tomady ny vahoaka, ary miara-mandresy amin’izany isika rehetra. Raha misy ny fihafiana kely tokony hatao, dia aoka harahina izany », hoy izy.
Mikasika ireo tolotra fanafody vita’ireo mpikaroka Malagasy dia nambaran’ny Praiminisitra fa misokatra amin’ny fahafahan’ny rehetra mitsabo tena araka ny filany avy isika. Na izany aza, hoy izy, dia tokony hanaraka ny fenitra fitsaboana izy ireny satria mahasoa ny mpanao fikarohana izany ary sady mahasoa ny vahoaka ihany koa. Etsy an-danin’izay dia mijery ny hanampiana ny ezaka efa natomboka ny fitondram-panjakana, izany dia amina teboka vitsivitsy izay nodinihina niaraka tamin’ireo tompon’andraikitry ny Faritra, ka samy hanatanteraka izany avokoa, na ny eo anivon’ny fitondrana foibe, na ny aty amin’ny Faritra, hoy ny Praiminisitra nandritra ny fanampim-panazavana netiny.
← Vonona amin’ny fandraisana marary ny Centre de Traitement Covid-19 Mahamasina
Conseil du gouvernement du Mercredi 07 Avril 2021 →
Filankevitry ny governemanta tao Antsirabe